Raaxo si aad u horumariso hal-abuurka farshaxanka kugu dhex jira | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Design Graphic, Khayraadka
Dhamaanteen waxaan kubilawnay waqti uun, had iyo jeer dhibaatooyin isku mid ah iyo isku dan ah. Waxaad ku fadhiisanaysaa kursi kasta, miis kasta iyo kumbuyuutar kasta. Waxaad iibsaneysaa alaabada naqshadeynta, waxaad raadineysaa qalab aad ku buuxiso waxaadna fureysaa dukumiinti maran.
Waxaad horumarinaysaa fikradaha, qoortaada hoos u dhigeysaa, dhabarkaaga u jaleecaysaa, wejigaaguna wejigaaga dhowr saacadood ka dib dhowr maalmood jirka oo dhan wuu xanuunaa. Taasi waa markii aan dhammaanteen isku mid ka nimaadno: Goobteenna shaqo waa mid aan abuurneyn.
Taasi waa markaan raadineyno internetka oo runtii ma ogin waxa aan raadineyno. Maanta laga bilaabo Creativos, waxaan ka soo qaadaneynaa tilmaamo yar si aad u ogaato meesha aad fiirineyso, waxa la raadinayo iyo qiimaha. Wax fudud sida miiska shaqada, kursi, ama fadhiga raaxada leh. Marka lagu daro booska lagu qaadanayo dhammaan waxyaabahaas si ay ugu fiicnaato.
1 Aynu ku bilowno kursi
2 Wax ku tiirsanow, ha dhicin!
3 Sooffa ergonomic
3.1 Naqshadeynta furaha fadhiga
4 Ku caawi naftaada kiniin
5 Dhamaan qor
6 Abaabul fikradahaaga
7 Hadaad awoodo, kamarad
7.2 waa 1200d
7.3 Xirfadlayaal badan
8 Laydhka qolkaaga waa muhiim
8.1 Gabagabo yar
Aynu ku bilowno kursi
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan marka la shaqeynayo fadhiga waa kursiga. Halka aan ku qaadan doonno inta badan waqtigeena. Maaddaama tani ay nagu adkeyneyso inaan halkaas degno muddada dhow iyo tan fog.
Tan awgeed, SteelCase waa mid ka mid ah kuraasta kugula qabsan doona adiga isla markaana kaa dhigi doona inaad runtii fiicnaato. Sida laga soo xigtay madaxweynaha astaanta: "kuraasta badankood looma samayn inay la qabsadaan jagooyinka cusub ee aan qaadanno." SteelCase haa. Dabcan, qiimahiisu wuxuu ku kacayaa qiimo ay adag tahay in lala gaaro qof kasta oo ka mid ah alaabooyinka badankood. Laakiin waxaa jira kuraas aan ka heli karno oo waliba ansax noqon kara.
Waxaan sidoo kale ka hadlaynaa fakadaan. Kuraasid ku takhasusay 'ciyaaraha' adduunka ciyaartooyda saacadaha ku qaata kumbuyuutarka. In kasta oo ay umuuqato keliya adeegsi gaar ah sida ciyaar, waxay aad ugu habboon yihiin naqshadeeyayaasha, raaxada iyo dhaqdhaqaaqa darteed. Iyada oo qiimo ka jaban.
Wax ku tiirsanow, ha dhicin!
Shaxda ay tahay inaad ku tiirsato oo aad dhigto mashiinnadaada oo dhan si ay u shaqeeyaan waa inaysan noqonin wax ka muhiimsan. Waana midda ay tahay meesha aad ku qaadanayso foomka aad dareemayso, marka waa inaad la qabsataa.
Markaan dooneyno inaan ku tababbaranno naqshadeynta garaafka, runta ayaa ah inaysan ahayn wax aad u gaar ah oo ay tahay inaan soo qaadanno. Miis wanaagsan oo leh meelaynta kumbuyuutarka iyo jiirka iyo kormeeraha ayaa si fiican u shaqeeya. Haddii la qaadi karo, xitaa ka fudud. Dabcan, aniga ahaan, waa inay lahaato godad badan iyo khaanado. Halka aad wax walba ka dalban karto oo aad la socon karto faa'iidooyinkaaga. Laakiin haddii aad sidoo kale ku tababbarto sawir farsamo, markaa haddii ay tahay inaad aado wax la taaban karo.
Miisaska leh jaanis, diiradda loo saaray dhererka dadka kala duwan iyo qalab adag. Sida ay noqon karaan kuwa lagu bixiyo Asturalba:
Asturalba waxay bixisaa qiimo kaladuwan dhammaan noocyada jeebabka. Haddii aad tahay arday jeebkaagu xadidan yahay, ha ka welwelin, Asturalba ayaa ka fikiraysa. Miiska RD-190 ayaa adiga loogu talagalay Si aad u bilowdo ku-celcelinta iyo abuurista fikradahaaga koowaad ayaa habboon. Qiimo ka yar 130 euro.
Laakiin halkaas kuma ekaanayso, haddii ujeeddadaadu tahay inaad raadiso wax xirfad leh oo la mideeyay waxa shaqadaadu u baahan tahay, waxaa jira miis ku yaal xagga sare ee xirfadlaha. Waxay ugu yeeraan RD-110 qiimihiisuna horeyba wuu ka sarreeyaa, laakiin waxay hubaal tahay inay ku habboon tahay baahidaada.
Labadaas ayaa tusaale u ah qaybta ugu sareysa iyo tan ugu hooseysa, laakiin waxaa jira talaabooyin u dhexeeya taas oo kaa caawin doonta inaad miisaankaaga ku cabirto adoo si weyn ula qabsanaaya waxaad runti u baahan tahay. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad fiiriso.
Waxay umuuqataa macquul, in fadhiga waa inay kula qabsadaan si ay kaaga dhigaan mid adiga kugu habboon. Laakiin tani had iyo jeer ma aha kiiska, mid ayaa diiradda saaraya bilicsanaanta goobta meesha marka loo eego wadarta la qabsiga dhabarka. Taasina waa sababta aan u ogaanno mustaqbalka.
Waxaan dooraneynaa qaabab kala duwan oo aan soo saarnay sanadihii la soo dhaafay taas oo sii kordheysa waxyeellada qoorta, dhabarka iyo gacmaha gaar ahaan. Akhlaaqda xun, fiiqnaanta, xanaaqa waxaa sababa dhowr jeer ficilladan xun ee aan ku qaadno dhabarka qolkeena.
Naqshadeeye, tani aad ayey uga muhiimsan tahay. Haddii aad ka shaqeyso isla kursiga ama fadhiga fadhiga laftiisa. Waana marka qofku nasto, waxa ugu soo noqnoqda waa tan. Iyo sida aan sameyno, ilaa aan si dhab ah u nasanno. Laga soo bilaabo maaddada lafteeda waxay muhiim u tahay qaabkeeda.
Naqshadeynta furaha fadhiga
Soo noqo. Fadhiga sariirta waa inuu ahaadaa mid adag, laakiin dhabarka jilicsan. Kelyaha waa in la ilaaliyaa iyadoo laga ilaalinayo jirka inuu siibto.
Hip. Waa inuusan ka hooseyn jilbaha.
Hub. Dhudhunku waa inuu ku tiirsanaadaa santuuqa gacanta, oo ah inuu xusulka ku jiro, oo aan ka hooseyn.
Cabbirka. Waxaa lagugula talinayaa inaad tagto dukaanka adoo cabiraya cabiraada saxda ah ee meesha lagaarsiinayo fadhiga.
Dhammaan alaabooyinka noocan ah, waxaa jira degello internet gaar ah oo naqshadeeyayaal caan ah oo daaweeya alaabta guriga loogu talagalay dadka leh dadaalkaas, sida qadada, GoyoEstudio.
Tani waa alaab aasaasi ah oo loo qaabeeyo, uma qalanto wax sida aad aragto. Laakiin taa ka sokow, waxaa jira qalab aad muhiim u ah oo kaa caawin doona inaad isku dheelitirto mashaariicdaada. Xusuus-qorka, kiniinnada garaafka, koobabka kafee, kaamirooyinka, iwm. Kuwani waa qalabka kuu fududeynaya maalintaada shaqada:
Ku caawi naftaada kiniin
Markaan naqshadeynayno qalin iyo warqad, waxay umuuqataa inaysan jirin wax xadidan oo dhaafsiisan tan. Laakiin markii aan dooneyno inaan u qaadno taas kumbuyuutarka, halkaas ayay horeyba u yara xadidan tahay. Maaha maleheena - taas oo mararka qaar u muuqata mid aan xad lahayn. Laakiin xorriyadda aad ku maareynayso curcurkaaga la mid ma aha inaad ku sameyso kumbuyuutar iyo trackpad. Tan awgeed waxaa jira kiniinno muuqaallo ah. Qiimo aad u kala duwan, laakiin ka ugu jaban waxay noqoneysaa mid waxtar leh, mararka qaarkoodna lala yaabo.
Nooca ugu caansan uguna suuq badan ee qaybtan waa: Wacom. Waxay bixisaa dhowr qaybood oo ah Kiniiniyada Sawirada oo loo isticmaali karo shaqooyin kala duwan. Waxa ugu fudud miiska Intuos. Intuos wax yar ma sharraxdo, taasna waa inay tahay kiniin qalin leh, oo ku habboon curcurka. Ku xidhan iyada oo loo adeegsanayo qalab kombuyuutarka ah kaas oo la jaan qaadi kara dhammaan noocyada codsiyada qiimaha € 80.
Laakiin haddii waxa aad rabto ay tahay inaad dareento awood, Cintiq waa guddigaaga. 27 ″ qalabka taabashada sare ee taabashada halka aad ka dareemi doontid wadada aad marayso. Qalinkii dareeraha cadaadiska ee raadinta wanaagsan. Dabcan, qiimaha aan horey u ognahay inuu aad uga qaalisan yahay, tayada awgood. Shaqo ka badan 2000 euro.
Wax walba kuma jiraan gudaha kumbuyuutarka. Haddii waqti kasta aad u baahato inaad baxdo, nasato, riyooto ... Ha iloobin inaad qolkaaga shaqada kala soo baxdo wax aad muhiim u ah - gaar ahaan dharkaaga-. Ajende. Ajandahaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad qorto wax kasta oo maskaxdaada soo mara. Sababtaas awgood, sidoo kale waa muhiim inaad kudirto dhajinta faallooyin gaar ah, iwm.
Kuwa jecel qoraalada, ajandahaaga isku kooba, qor fikradaha si dhakhso leh oo wasakh ah. Malaha ajandaha kuma filna oo waxay u baahan yihiin wax baaxaddiisu weyn tahay. Haddii aad ku shaqeysid kumbuyuutar, haysashada loox nuurad ah faa'iido ma leh maxaa yeelay waxay waxyeello u leedahay hawo qaadashada kombiyuutarada. Looxyada cad ayaa loo isticmaalaa tan. Qalimaan.
Hadaad awoodo, kamarad
Marar badan waxaan u maleyneynaa in nashqadeynta ay diiradda saareyso miiska shaqada iyo meel taagan. Laakiin sidaas maahan. Shaqooyinka u baahan male-awaalka waa inay lahaadaan goob shaqo oo is beddeleysa, taas oo ah, wax kasta oo aad ku aragto hareerahaaga ayaa kuu adeegi doona marka ay tahay inaad shaqeyso.
Taasi waa sababta kamaradu ay muhiim u tahay in meesha laga baxo oo la ogaado qaabab cusub, midabbo iyo mawduucyo. Waxaa ku yaal dhammaan noocyada kamaradaha suuqa oo dhammaantood - ama ku dhowaad dhammaantood - waxay u adeegaan waxaan dooneyno. Uma baahnin kamarad heer sare ah oo xirfad leh maadaama aynaan gebi ahaanba u go'nayn.
In kasta oo haddii aan dooneyno inaan wax baranno oo aan awoodno, annaguna waan dooran karnaa iyaga. Waa kuwan tusaalooyin:
FujiFilm wuxuu abuuray kamarad Polaroid ah oo leh nashqadeyn casri ah. Wax sida isku darka Polaroids ka hor taabashada hadda. Midabyo badan sida buluug, jaalle ama midabbo cusub oo lagu daray sida raspberry ama canab.
Kaamarad aan xirfad lahayn laakiin fududahay in la isticmaalo kamarad. Sawiradooda ayaa isla markiiba la muujiyaa waxaadna lahaan doontaa caddeyn muuqaal ahaaneed.
Kaamiro nus-xirfadeed ah oo ku siin doonta dareenka ah inaad tahay sawir qaade. Wax fudud, maareynta lambarka F ama lambarka ISO oo kaa dhigi doona inaad beddesho aaladda furaha muraayadaha, si aad ula qabsatid nalka gala kamaraddaada ama buuqa sawirka. Wax aad u adag sax?
Wax aan la baran karin. Bogag badan ayaa kaa caawin kara tan, laakiin hubaal waad ogaan doontaa sida loo sameeyo.
Laga bilaabo halkan, waxaa jira kaamirooyin iyo kaamirooyinka nuucaan ah sida 700D illaa 5D illaa 60D haddii aan ka hadalno Canon. Waxaan sidoo kale arki karnaa nikon, pentax ama nooc kasta. Waxaa jira dagaallo u dhexeeya isticmaaleyaasha u dagaallamaya kan u roon ama ka xun. Sida wax walba.
Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 400 ilaa € 2000 iyadoo kuxiran miisaaniyadaada iyo waxaad rabto inaad ku maal gashato alaabtaan. Qof kastaa wuxuu u baahan doonaa mid ama midka kale, halkan ayaad ku dooraneysaa.
Laydhka qolkaaga waa muhiim
Ka caawi naftaada nalalka dabiiciga ah, qol waasac ah iyo meelo waaweyn. Waa mid ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka u ah inaad ku bilowdo shaqadaada, maadaama nal khaldan aadan ugu shaqeyn karin sidii raaxo oo aad si fudud ugu daasho.
Sidaa darteed, haysashada iftiin badan oo dabiici ah waxay kaa dhigeysaa hal abuur badan. Dabcan, haddii aadan awoodi karin raaxadaas oo qolkaagu mugdi yahay, ha u dagin uun nalka nooc kasta.
Marka hore, inuu yahay LED, si uusan indhaha uga daalin iyo in laydhku aanu lahayn midab xoog leh. LedBox wuxuu la shaqeeyaa nalka noocan ah, laakiin hubaal waxaad sidoo kale ka heli doontaa alaab wanaagsan Amazon ama dukaan kale.
Wax kasta oo aan dib ugu eegnay qodobkaan waxay ka hadlayaan waxa ku xeeran goobtaada shaqada. Maaddaama aad hubin doontid marna kama qaban doonno arrimaha qalabka iyo softiweerka si aan u fulino dhammaan howlahaaga, wax mararka qaar u muuqda kuwo muhiim ah laakiin aan muhiim u ahayn sida booska kugu hareeraysan.
Kumbuyuutar fiican, oo leh 16 gigabytes oo RAM ah, SSD Hard drives, Motherboard iyo processor i7 ah iyo dhammaan qalabka ugu fiican had iyo jeer waa muhiim marka la qabanayo qalabka sida Photoshop, sawirqaade ama autoCAD, sidoo kale software awood badan.
Laakiin fikradaha kama soo baxaan kaliya qalabka aad adigu haysato, ama lacagta aad isticmaashid. Naqshadeeyayaal badan ayaa shaqadooda ka hela miisaaniyad hoose iyo qalab qiimo jaban. Waxa madaxaaga ku xeeran ayaa ka muhiimsan.
Iftiiminta si aysan indhahaaga u daalin, booska dambe si aadan xooggaaga u saarin xanuunka ka dhasha saacadaha badan ee fadhiga iyo dabeecadaha yar yar si aad wax walba u horumariso.
Qaddarin yar ayaa ah - innagoo dhammaanteen u jeedno himiladeenna raaxeysikeennu waa mid ballaadhan, awoodda kombiyuutarka iyo softiweerkii ugu dambeeyay. Laakiin si kastaba ha noqotee aaladda ugu muhiimsan waa maskaxda. Iyo si aad u daryeesho, waa inaad abuurtaa jawi hufan oo hareeraha ka jira oo ay ku shaqeyn karto waxna soo saar badan.
Sida aan had iyo jeer idhaahdo, waan hubaa in badan oo idinka mid ahi horeba u ogaayeen oo haddii aad taqaanid noocyo kale, fikrado kale, way fiicnaan lahayd inaad awood u leedahay inaad ka caawiso bulshada hal-abuurka ah inay ogaadaan dhammaan aaladaha lagu horumariyo fikradaha iyadoo dhammaan la wada ogyahay. isticmaalayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Raaxo si loo horumariyo hal-abuurka